Fitsidihan'ny Ambasadaoron'i Royaume Uni | Primature
Fitsidihan’ny Ambasadaoron’i Royaume Uni
Mahazoarivo, ny 18 febroary 2021 – Noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian teto amin’ny lapan’i Mahazoarivo androany maraina ny Ambasadaoro vaovaon’i Royaume uni, miasa sy monina eto Madagasikara, Andriamatoa David Ashley, izay tonga nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fifanajàna taorian’ny nanendrena azy.
Naneho ny fahafaham-pony tamin’ny fihaonana tamin’ny Lehiben’ny governemanta Malagasy ny Ambasadaoro, ary nanazava ny tanjon’ny fireneny eto amintsika, dia ny hanamafisana ny fifandraisana ara-pirahalahiana misy eo amin’ny roa tonta; ny hanohanana ny fampandrosoana an’i Madagasikara, indrindra eo amin’ny lafiny fahasalamam-bahoaka sy ny fanabeazana; ary ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny hiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara, sy amin’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Nomarihiny fa nifampiresahana tamin’ny Praiminisitra ny hisian’ny kaonferansy lehibe momban’ny fiovaovan’ny toetr’andro izay hatao any Glasgow, renivohitr’i Ecosse, ny 1 hatramin’ny 12 novambra 2021. Antenaina fa handray anjara i Madagasikara, noho izy mbola manana tontolo iainana voatahiry, nefa mety hiharan’ny voka-dratsin’io fiovaovan’ny toetr’andro io. Koa heverina fa zava-dehibe ny fihainoana ny feon’i Madagasikara mandritra ny fihaonana voalaza, hoy ny Ambasadaoro teo am-pamaranana.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 17 Février 2021
Fanombohana ny asa fanarenana ny fotodrafitrasa mitondra rano amin’ny lemak’i Mahavavy →
Fitsidihana ara-pomba fifanajana roa sosona